Yekumhanyisa Kuzivisa Mwedzi: Nei WebSpeed ​​Matters Infographic
Isu takanyora zvishoma nezve zvinhu zvinokanganisa kugona kwewebsite yako kurodha nekukurumidza uye vakagovana sei inononoka kumhanya kukuvadza bhizinesi rako. Ndiri kutendeseka kushamiswa nenhamba yevatengi vatinotarisana navo vanoshandisa yakawandisa nguva uye simba pane zvemukati zvekushambadzira uye nzira dzekusimudzira - zvese uku uchidzirodha pane yakasarudzika inomiririra ine saiti isina kugadzirirwa kurodha nekukurumidza. Isu tinoramba tichiongorora yedu yega saiti kumhanya uye kugadzirisa zvimwe mwedzi wega kudzikisa nguva inotora kurodha.
Kunonoka kumhanya kunoshungurudza kune vashandisi, kukanganisa kutengesa, ruzivo rwefoni, ruzivo rwevatengi, chinzvimbo chekutsvaga injini, uye shanduko; zvese izvi zvinokanganisa mari yako. Iyi infographic kubva Unyanzvi, inofamba nemakumi maviri nemaviri emakesi ezvidzidzo anoratidza maitiro ekuvandudza peji rekutakura nguva zvakakanganisa mhedzisiro yebhizinesi:
mPulse nharechiyero chekushandurwa chiri 1.9% apo mapeji anotakura mumasekonzi 2.4, asi izvo zvinodonha kusvika ku0.6 kana vachinge vapfuura 5.7 yechipiri mutoro nguva.
Yahoo! traffic inowedzera ne9% kana ivo vakadzora peji rekutakura nguva ne 0.4 masekondi.
Amazon inogona kurasikirwa $ 1.6 bhiriyoni pamari yegore rega rega kana yavo peji rekutakura nguva yaive 1 sekondi zvishoma zvishoma.
Bing inoshuma kuti kunonoka kwepiri-kwechipiri kunotungamira ku2% yakarasikirwa nemari pamushanyi, 4.3% mashoma kudzvanya, uye 3.75% mashoma ekutsvaga mibvunzo.
SmartFurniture kukurumidza kukurumidza kwakavawana 20% mu organic traffic, 14% kuwedzera mune peji maonero, uye kuwedzera masosi neavhareji yezvinzvimbo zviviri pazita rakakosha.
Shopzilla yakaratidza kuti anokurumidza mapeji anounza 7% kusvika 12% kutendeuka kwakawanda kupfuura iwo anononoka mapeji.
Microsoft inoshuma kuti 400-millisecond kunonoka kunogona kudzikisa query vhoriyamu ne0.21%.
Firefox inotaura kuti kudzikisa avhareji nguva yekuremerwa nemasekonzi 2.2 kunogona kuwedzera kurodha pasi ne15.4%.
Google inoshuma kuti kuwedzera latency ne100 kusvika ku400 milliseconds kwakadzora kutsvaga kwezuva nezuva ne0.2% uye 0.6% zvichiteerana.
AutoAnything cheka peji mutoro kumhanya muhafu uye wakasangana ne13% kuwedzera mukutengesa uye ne9% kuwedzera mumatambudziko ekushandurwa.
Edmunds yakaveurwa 7 masekondi kubva pakutakura nguva uye yakasangana ne17% kuwedzera mune peji maonero uye ne3% kuwedzera mune yekushambadzira
EBay uye Walmart yakavandudza yavo yekumhanyisa nguva peji, zvichikonzera kuwedzera pane angangoita ese ekubata uye ekushandura metric pane saiti!
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti haufanire kupira dhizaini yekumhanya. Isu takabatsira kambani inozivikanwa yekudyara iyo yainge yaisa mari mukumisikidza uye saiti inoshamisa. Iyo dhizaini dhizaini yavakasarudza yakavaka yakanaka tema kubva pakutanga, chirongwa chinodhura kwazvo. Pavakavhura saiti pane mutengesi wekutanga wekubatira, iwo mapeji anga achiisa mumasekondi gumi nematanhatu, asingagamuchirwe kune vazhinji vashandisi. Isu takawana toni yezvinyorwa - kusanganisira zvisina basa zvinyorwa zvinoteedzera saiti yakafara, mavhidhiyo asina kugadziridzwa, mifananidzo isina kumanikidzwa, akawanda ezvokunze zvinyorwa, uye akawanda masitayiti machira. Mukati memavhiki mashoma, takanga tine saiti kurodha mumasekondi maviri tichishandisa nzira dzinoverengeka.
Sangano redu, DK New Media, yakacherechedzwa nekugadziriswa matani ezvinyorwa - kusanganisira zvisina basa zvinyorwa zvinoteedzera saiti yakafara, mavhidhiyo asina kugadziridzwa, mifananidzo isina kumanikidzwa, akawanda ezvokunze zvinyorwa, uye akawanda masitayiti machira. Mukati memavhiki mashoma, isu taive nekutakura saiti mumasekondi maviri tichishandisa nzira dzinoverengeka Kugadzirisa saiti hakuna kushandura dhizaini dhizaini kamwe - asi zvine mutsindo kuvandudza ruzivo rwevashandisi.
Tags: loadmaxcdnmpulsepeji mutoropeji rekutakura nguvapage speedpeji kurodha nguvamapepahavukavuzvishandiso zvekumhanyatorbitkumhanya kwewebhukukurumidza kwewebsitewebspeed